56 taona ny nahazahoana ny fahaleovan-tena
Nanokana andro niaraha-nifaly ny ekipan’ny Radio Voanio
Faha 56 taona nahazahoana ny fahaleovan-tena isan’ny tsy diso anjara amin’izany ny ekipan’ny Radio Voanio. Ny andron’ny Asabotsy faha 25 jona 2016 no niara-nifaly sy nankalazana ny fetim-pirena Malagasy ny ekipan’ny Radio voanio. Isan-taona, dia misy foana ny fiaraha mifaly sy mikorana rehefa amin’ny adro fety toy izao, isany antom-pisian’izao fiaraha milanonana sy mikorana kely izao ihany koa no mba hifampiresahana misimisy kokoa ny ivelan’ny asa akotry ny fifaneraserana ara-kasa andavan’andro.
Tsapa tokoa mantsy fa ny ankamaroan’ny fotoanan’ny tsirairay avy dia saika aty ampiasana noho izany dia efa tokan-trano iray ny ekipan’ny Radio Voanio ka rariny loatra raha mba manao fety miaraka. Nisy ny fiarahana nitsakitsaky ary nofaranana tamin’ny fanapahana mofomamy 56 taona ny fahaleovan-tena izany.
(122) S. Lantomalala : 27-06-2016 - 07:21